Umkhiqizi kanye neFektri Engcono Kakhulu Yokuhlanza iso I-Bohua
Isiteshi samanzi asakaza ngamanzi afudumele sikulungele ukusetshenziswa ngasikhathi sinye kwamadivayisi amaningi wokuhlanza iso, ukuqinisekisa ukushisa kwamanzi okuphuma phakathi kwama-degree angu-15.7-37.8. Uhlelo lusebenzisa ithangi lokugcina elikhulu, ukuhlinzeka ngamanzi angama-71 gal / min, anganikeza amanzi ngamathuluzi awodwa noma amaningi wokugeza amehlo, aqinisekise ukuthi isikhathi sokusetshenziswa kwamanzi singaphezu kwemizuzu engu-15.
Idivayisi yenziwe ngesisekelo sensimbi nokhuni, efanelekile ukusetshenziswa kwangaphakathi efektri. Amanzi ashisayo namanzi abandayo axutshwa yidivayisi yokushisa kagesi, abese enikezwa ku-washer yamehlo ukuze isetshenziswe. Umkhiqizo uhambelana nezidingo zokushisa kwamanzi okuphuma kwe-washer yamehlo okuchazwe kwi-American ANSI Z358-1 2014 standard washer standard. Ingasetshenziswa ebusika, ukusakazwa kwamanzi afudumele okusakaza ukwakhiwa kwesiteshi: ithangi lokugcina amanzi lokushisa kagesi, ipompo yengcindezi, iphampu ejikelezayo, umxube oshisayo nobandayo.
Ithangi lokugcina amanzi elishisayo lihlinzeka ngamanzi ashisayo namanzi abandayo ukwenza ukushisa kwamanzi okuphuma kwe-eyewash kuhambisane ne-ANSI Z358-1 2014 eyewash standard. Ithangi lokugcina amanzi lokushisa kagesi lenzelwe isifudumezi sikagesi ukushisa umthombo wamanzi, kanye nesilawuli sethempelesha ukulawula ukushisa komthombo wamanzi wethangi lokugcina amanzi ukuvimbela isimo sokushisa kakhulu kwamazinga okushisa kwamanzi. Isixubanisi samanzi ashisayo namakhaza silawula izinga lokushisa lamanzi okuphuma kwe-eyewash. Izinga lokushisa lamanzi elishisayo nelibandayo lokuxuba amanzi lingasethwa ngokuya ngamazinga okushisa asezingeni enkambu ebusika. Imishini eyodwa noma eminingi yokuhlanza iso ingahlinzekwa ukuze isetshenziswe.
Izinto ezisebenza ngogesi ohlelweni zinhlobo lohlobo lokuqhuma, ezingasetshenziswa ezindaweni ezinendawo yokuqhuma. Uhlelo luxhunywe nedivayisi yegumbi lokulawula elijwayelekile. Lapho ukusetshenziswa kwe-eyewash kusayithi, isinali lokushintsha linganikezwa egumbini lokulawula elijwayelekile. Idivayisi yohlelo ifakwe i-alamu ye-acoustic-optical alamu nokukhanya kokuqhuma.
Imodeli eyisisekelo: 0209-10968
0209-1097: Idizayini yebhakede lokugcina amanzi liyashintshwa ngesisekelo semodeli eyisisekelo
0209-1098: Ngokuya ngemodeli eyisisekelo, ishintshelwa ekwakhiweni kohlobo lwebhokisi elingaphandle
0209-1099: Ngesisekelo semodeli eyisisekelo, ithuthukiselwa ekwakhiweni kwethangi lokugcina ugesi ngamanzi ahlanganisiwe wamanzi abandayo namanzi ashisayo
Langaphambilini Idivayisi ephezulu yokugeza iso
Olandelayo: I-eyewash eyenziwe ngokwezifiso
Isiteshi Sokugeza Amanzi Esizungezayo
Isiteshi Esibanzi Sokuwashwa Kwamehlo
Ukupholisa Nokushisa Isiteshi Sokugeza Iziso
Isiteshi Sokushisa Sokushisa Esishisayo
Isitoreji Sokuhlanza Amanzi Esitoreji Samanzi